नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय...
हालै आईपीओ निष्कासन गरेकाे तेह्रथुम पावरकाे नाफामा आकर्षक सुधार, ईपीएस कति ?
तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तिय विवरण प्रकाशित गरेको छ । ...
शुक्रबार, १७ मंसिर २०७८, १२ : २५
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको नाफामा सामान्य बृद्धि अन्य अवस्था कस्तो ?
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले गत आर्थिक बर्षको चौथो त्रैमाससम्मको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा कम्पनीको मूनाफामा सामान्य बृद्धि देखिएको छ । ...
सोमबार, १३ मंसिर २०७८, ०७ : ०३
आईपीओ ल्याउन लागेकाे नेष्डो समृद्ध लघुवित्तकाे कति छ नाफा ?
नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलाे त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ...
आइतबार, ०५ मंसिर २०७८, ११ : ३३
५२.३२ प्रतिशतले बढ्यो राष्ट्रिय बिमा संस्थानको नाफा, बिमा शुल्क कति ?
राष्ट्रिय बिमा संस्थानले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ...
विहीबार, ०२ मंसिर २०७८, १५ : ३७
प्रभु इन्स्याेरेन्सको नाफामा वृद्धि, अन्य सूचक कस्ता छन् ?
प्रभु इन्स्याेरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ...
विहीबार, ०२ मंसिर २०७८, १३ : २१
बम्पर लाभांश घोषणा गरेको महिला लघुवित्तको नाफामा उछाल, प्रतिसेयर आम्दानी ११४ रुपैयाँ
महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार संस्थाले राम्रो प्रगति गरेको देखिएको छ । ...
विहीबार, ०२ मंसिर २०७८, ०८ : ५०
ज्योति लाइफको नाफा २८ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको ०७८/०७९ को पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ...
बुधबार, ०१ मंसिर २०७८, १० : ३७
राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको नाफा १९.८७ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य सूचक कस्तो ?
राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ...
बुधबार, ०१ मंसिर २०७८, १० : २३
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको नाफा १० प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको उक्त विवरण अनुसार सो अवधिसम्म कम्पनीले मुनाफा बृद्धि । ...
बुधबार, ०१ मंसिर २०७८, ०७ : ५५
हालै आईपिओ जारी गरेको मानुषी लघुवित्तका सबै सूचक सकारात्मक, इपिएस कति ?
मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार अघिल्लो यसै अवधिको तुलनामा संस्थाले राम्रो प्रगति गरेको देखिएको छ । ...
बुधबार, ०१ मंसिर २०७८, ०७ : २५
११०.३२ प्रतिशतले बढ्याे युनिलिभर नेपालको नाफा, प्रतिसेयर आम्दानी १ हजार ७२ रुपैयाँ
युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तिय विवरण प्रकाशन गरेको छ । ...
विद्युत उत्पादनले बढायाे अपर तामाकाेशीकाे नाफा, ईपीएस ३२ रुपैयाँमाथि पुग्दा अन्य सूचक कस्ता छन् ?
अपर तामाकाेशी हाइड्राेपावर कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तिय विवरण प्रकाशित गरेको छ । ...
मंगलबार, ३० कार्तिक २०७८, १३ : १८
सिटिजन लाइफको जीवन बीमा कोष ४ अर्ब नाघ्यो, बीमा शुल्क आर्जनमा पनि शतप्रतिशत वृद्धि
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ...
मंगलबार, ३० कार्तिक २०७८, १२ : २७
१३.६२ प्रतिशतले बढ्याे अपि पावरकाे विद्युत् बिक्री आम्दानी, नाफा कति छ ?
अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तिय विवरण प्रकाशित गरेको छ । ...
मंगलबार, ३० कार्तिक २०७८, ११ : ५०
नेपाल टेलिकमको नाफा ४८ प्रतिशतले बढ्दा कति पुग्यो ईपिएस ?
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नाफामा बृद्धि आएको छ । ...
मंगलबार, ३० कार्तिक २०७८, ११ : ३९
खुद मुनाफा ३५ प्रतिशतले बढ्दा पनि किन घट्यो नागरिक लगानी कोषको इपिएस ?
नागरिक लगानी कोषले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । आज मंगलबार प्रकाशित विवरण अनुसार विवरण अनुसार कम्पनीको मुनाफा ३५.१३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
मंगलबार, ३० कार्तिक २०७८, १० : ५१
जीवन विकास लघुवित्तले यसरी गर्याे प्रगति : प्रतिसेयर आम्दानी ११६.११ रुपैयाँ पुग्दा नाफा कति ?
जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ...
मंगलबार, ३० कार्तिक २०७८, १० : ५०
शिखर इन्स्योरेन्सको नाफा ९ प्रतिशतले बढ्यो, किन घट्यो इपिएस ?
शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ...